Zvemagariro Media: SAP Global Survey (Chikamu II) | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 20, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iyo nyaya yekumashure kwekuwana kwandakaita kufarira muSocial Media yaive yakanyatsotsanangurwa - musanganiswa wepandakashanda, zvandaiitira kurarama uye vanhu vane mukurumbira muhupenyu hwangu. Saka zvakaomarara, kutaura chokwadi, zvekuti ndakanyora chinyorwa chose pa Maitiro andakaita kufarira Social Media. Shel akapfuudza mimwe mibvunzo iyo yakakosha zvakadaro, saka ndinoda kupindura iyo iri mune inotevera yekutevera.
2. Ndeapi maturusi enhau aunoshandisa?
Kunyanya, ini ndinoshandisa WordPress, Del.icio.usLinkedin, Plaxo, naJaiku. Ini ndinoshandisawo Facebook, Nzvimbo yangu, Ryze, Twitter uye Pownce. Nharaunda, ini ndinoshandisawo IndyMojo uye, zvedi, MyColts.net.
3. Masocial media akachinja sei bhizinesi rako uye / kana hupenyu hwako?
Ini ndinoona zvakati wandei zvinyorwa zvekuti Social Media iri sei kuparara nguva yedu. Izvi zvinyorwa zvakapfupika mumaonero avo enetiweki uye zvakadii zvinoita kuti tikwanise kuwedzera zvibereko. Bhizinesi rinonyanya kuitwa kuburikidza nehukama… Zvemagariro venhau zvinotibvumidza kubatana nevanhu zviri nyore kupfuura zvataimboita kare.
Nhasi ndanga ndichitsvaga yakachipa inodhura inobuda fax sevhisi yekambani yangu. Ndakatsvaga Del.icio.us ndokuwana JBlast. Tevere, ndiri kutsvaga dunhu dura rekudonhedza mitsara yefoni munzvimbo yedu nyowani hofisi - ini ndichaitumira semubvunzo paLinkedIn. Imwe nzira ndeye kutora nguva uchitsvaga mambure, uchidana vemabhizinesi emuno, nezvimwe. Tinotambisa nguva yakawandisa tisina kubatana kwakakodzera! Rangarira mazuva atakatadza kutsvaga zvinhu paInternet? Ndino! Zvaisiririsa.
Kana zviri zvehupenyu hwangu, zvakave nemhedzisiro inoshamisa. Ndakawana rangu razvino basa kuburikidza nebhurogu yangu uye kushamwaridzana nevemuno mahunyanzvi paSocial Media, ndinotaura mumisangano yematunhu pamusoro wenyaya uye ndiri kuyedza kuzvibvunza kubva kubasa kwenguva yakareba zvakakwana kuti ndinyatso batsira mamwe matunhu asiri purofiti.
4. Ndiudze nezvemagariro enhau uye Indianapolis Colts. Iwe unonyatsonzwa here kuti vezvenhau vanozovabatsira kuhwina Superbowl?
Indianapolis Colts ndiye achatanga kukuudza izvozvo Wegumi nemaviri Munhu inobatsira kuhwina mitambo yese. Wegumi nemaviri murume anoreva fan, munhu ari kunze kwebindu ane chakanyanya kukanganisa pamutambo. Ndanga ndiri kuRCA Dome ndikawona mimwe mitambo uye zvinoshamisa ruzha nesimba iro fan rinounza kumutambo! Funga nezve hupenyu hwako wega kwekanguva uye rangarira nguva iyo mumwe munhu akatenda mauri. Inokupa iwe nechido chekubudirira, handiti? Zvino chimbofungidzira dunhu rese richikutsigira! Zvakadii nezveavo mafeni anopfuura enharaunda yedunhu?
VaColts vane vanhu vanopfuura miriyoni vanoshanyira webhusaiti yavo. Vazhinji vacho havagare pano muIndipolis! Ivo vanotova nevateveri mhiri kwemakungwa vanoteera yega mitambo uye vanotora nzvimbo yavo saiti isingamire. Mubvunzo wakatanga kubvunzwa, timu ingabatana sei nefeni yega yega zvirinani uye ivo vateveri vangabatana sei zvirinani? Yemagariro Network ndiyo yaive mhinduro. Murairidzi Dungy ikozvino blogging! Fungidzira… murairidzi weNFL ane hukama hwakananga nevateveri vechikwata.
Sezvo nechero nyanzvi yemitambo timu, maColts anoziva kuti mwaka mukuru unouya uye unoenda. Nehurombo, vamwe vateveri vanouya voenda nemwaka iwoyo. MaColts ibhizinesi pamwe nechikwata uye vanofanirwa kuita basa rakakura kuona kuti varatidza vateveri kuonga. Mune mamwe mabhizinesi, izvi zvinozivikanwa seMutengi Kuvimbika. VaColts vanoda kuramba vakabatana nevateveri vavo kuitira kuti kana nguva dzave dzakaipa vateveri vanenge vachiripo. Kutenda kune rese rebasa riri kuitwa nesangano, ivo vachadaro!
5. Ndiudze nezvemagariro enhau muindasitiri yezvikafu neresitorendi. Inoshandiswa zvakadii? Ingashandiswa sei zvirinani?
Iyo Yekudya uye Yekudyira indasitiri indasitiri ine akasimba margins iwe aunogona kufungidzira. Ipo, senyika, isu tiri kuenderera mberi nekudya kunze kazhinji, maresitorendi ari kuvakwa kuruboshwe uye kurudyi… uye zvichizobuda kunze kwebhizinesi. Chero ani zvake anogara aine kambani anogara achifarira kana iwe uchifamba musuwo uye mumwe munhu achiti, "Hi Doug!". Pamhepo, izvi hazvina kusiyana. Maresitorendi ane online yakasimba kuvapo ari kuona 20% kusvika 30% kukura mukutora-kunze uye kuendesa. Hazvingave zvakanaka here kana ivo vakayeuka odha yako yekupedzisira kana yako yaunofarira ndiro kana yako yekukanganiswa nenzungu?
Iwe unombozvibvunza here kuti ndiani arikukubikira chikafu icho? Ini zvechokwadi ndinoita! Sei iwe uchifunga kuti maShefu mumaresitorendi anodhura ari kutaridzika? Ndihwo hukama hwehukama nemubatsiri hunokosha, kwete chikafu nguva dzose. Kudya kushamwaridzana, kwete kuita zvemuviri - uye maresitorendi arikushayikwa pavanenge vasiri kusvika kune vavanoshandisa online. Nehurombo, nekuda kwemahara vanhu vazhinji havadi kupinda mune ino indasitiri. Ini ndinofunga vanhu vanoita, zvakadaro, vane chaicho chigadzirwa uye, kana chikashandiswa, ivo vachakohwa iwo mabhenefiti!
Tichasvika ipapo pa B2C parutivi rwebhizinesi. Vanoda chikafu vava kutoita yavo yega chikamu. Buda All Recipes, pasocial network kune vanhu vezuva nezuva. Uye vanhu vakatumira uye vakabvunza kuti nei pasina Restaurant nzvimbo yemagariro Kunze Uko.
6. Iwe unoita kunge wave izwi re Heartlands rezvemagariro. Iwe unogona kundiudza mashandisiro anoita vanhu uye mabhizinesi muzvizhinji mazwi? Ndezvipi zvishandiso zvavari kushandisa?
Iyo Heartland inzvimbo inoshamisa ine vanhu vakuru, vanoshanda nesimba. Tekinoroji inogara ichionekwa sechishandiso asi kwete nguva dzose mhinduro pano. Makambani ekuvandudza muno muIndipolis anovaka maturusi mazhinji… ivo vanogadzira vanovaka mamwe mapomoreti akaomarara ari musana wemaindasitiri akati wandei. Iko silicon mupata unogara uchitsvaga iyo 'inotevera pfungwa', vanhu pano vane hanya nekuita kuti mabhizinesi aripo ashande.
Nekuda kweizvozvo, Social Media ichiri mudiki. Vakuru vanowanzo tarisa maturusi aya sematoyi. Ndine shamwari dzicharamba IM ini nekuti ndirwo rudzi rwezvinhu zvinoitwa nevana vavo. Yedu Civic uye Commerce maindasitiri ari kumashure kumashure mune chero tekinoroji, zvisinei neSocial Media. Yedu maUniversity ndiwo akanakisa munyika asi isu tinorasa maGraduates edu kune mamwe matunhu nekuti bhizinesi renharaunda redu harizovhure maziso aro kuzvinhu zvakaita seSocial Media semhinduro inoshanda yebhizinesi.
Isu tichachinja, uye kune vamwe vanhu pano munharaunda vanozofambisa iyo shanduko. Handina chokwadi chekuti ndiri ari izwi, asi ini chokwadi ndicharamba ndichiedza. Iko hakuna chikonzero nei tisingafanire kukwikwidza neSeattle neSan Jose kupihwa zvakanakisa zvikoro uye inoshamisa mutengo wehupenyu watinayo pano!
7. Ngatitaurei nezvebhizinesi mune zvese. Mabhizinesi madiki here kana makuru, vachishandisa vezvenhau muMidwest? Kusvika papi?
Zvichida muenzaniso wakanakisa wekushandisa Tekinoroji ishamwari Roger Williams neiyo Emergent Leadership Institute muno muIndipolis. Roger akazviviga muFacebook kuti ataure nevechidiki mudunhu.
Iyo Emergent Hutungamiri Sisitimu (ELI) inobata nzvimbo yeIndiapolis vechidiki kuve vanobatana munharaunda medu kuburikidza neHelp Indy Online (HIO) uye Community Access Point (CAP) zvirongwa. Ndinowana maEVites kubva kuRoger vhiki rega rega… anofanira kumhanya zana mamaira paawa. Ndiri kutarisira kumubatsira zvakanyanya mune ramangwana.
Pat neni takaparurawo Ini Sarudza Indy!, saiti iyo vagari venharaunda nevatungamiriri vanogona kunyora, mumazwi avo, nezve nei vachida pakati Indiana. Kuwana saiti yakavhurika uye haina kumbobvira yashungurudzwa. Idzo nyaya dzinonakidza - uye dzinonyatsonongedzera kune izvo zvinonakidza nezveIndy. Tinoshuva kuti dai taipedza nguva yakawandisa pane ino saiti - asi zvakatsvinda kuona vanhu vachinotumira nguva nenguva. Zviri chaizvo Indiana!
Kunze kweiyo The indianapolis Colts, pepanhau renharaunda riri kutanga kuona kukosha muSocial Media futi. Buda IndyMoms, inonakidza saiti iyo dunhu rePepanhau rinomhanya iro rinobudirira pane mushandisi inogadzira zvemukati. Ndinoshuva kuti dai dzimwe nhepfenyuro dzaizobata! Tine rimwe pepanhau rakanakisa muno mutaundi uye nzvimbo dzinoverengeka dzakanaka dzebhizinesi (nhepfenyuro nekudhinda). Ini ndinotenda vanogona kuvandudza zvakanyanya kupinda kwavo kuburikidza neSocial Media.
ONA: Ini ndichaedza kuteedzera pane yekupedzisira mashoma mibvunzo mangwana manheru!
Tags: kuongorora kwenyikasapsap kuongorora kwenyika
Inogona Zvemagariro Midhiya Kurapa Kushungurudzika?
Aug 21, 2007 na1:13 PM
Murume wechi12 ndiye mheremhere yevanhu yavanopomba pamaspeaker.
Aug 21, 2007 na2:48 PM
Anodaro Steeler fan… imi vakomana mainzwika nemhere mwaka mishoma yapfuura pawakapinda muRCA Dome kuitira mitambo yekutamba!